Maalinta: Sebtember 2, 2018
Jannada oo ku yaal Saldhig Tababarka Selim Salim
Thanks to abuuritaanka xarun leh jacayl cagaaran iyada oo loo jeedo, abuuritaanka aagga sharciga ee saldhigga iyo la socoshada mashaariicda qoditaanka ee ay fulisay TCDD sannadihii 1973 iyo 74, waxay ku dhowdahay inay cagaar tahay badhtamaha tallaabada. [More ...]
Makhaayadda mashruuca ee Babadağ ayaa bilaabay inuu u adeego
Xubnaha Golaha Fethiye Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha xubnaha ka ah Babadağ 1700 mitir iyo dhismaha makhaayada cusub ayaa la soo gabagabeeyey waxayna bilaabeen inay u adeegaan sidii martida Kirtur Co. Xubnaha Golaha ee dhismaha ku jira [More ...]
Waddada Koofurta Jidka ah ee Jidka Tareenka ah ma ahan mid ku habboon Trabzon
Rugta Trabzon ee naqshadeeyeyaasha Madaxweynaha Gürol Ustaömeroğlu, Trabzon, wadada ringka koonfurta iyo nidaamka tareenka ayaa ku soo noqday Tangle oo loo keenay ajandaha. Ustaömeroğlu wuxuu ku dooday in wadada giraaniga koonfureed iyo nidaamka tareenka aysan ahayn kuwa beddelka ah. [More ...]
Moodooyinka adag ee Ankara-Konya Tareenka Xawaaraha Sare
Ankara, Konya, u dhaqaaqida Tareenka Xawaaraha Sare, waxaa ka dhacay koronto. Qaboojiyeyaasha hawluhu ma shaqeynin muddadii 1-nus-saac-dejinta. Albaabo gacanta lagu furay markii ay codsadeen rakaab ka yimid Ankara iyo Konya [More ...]
Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha ayaa Kanal Istanbul geeyay qandaraaska lix bilood ee labaad. 18 milyan 57 kun oo TL meelayn ah ayaa la siiyay mashruuca. Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha, [More ...]
Samsunspor, lambarka sirta ee loo diyaariyey kulanka ugu horreeya xilli ciyaareedka cusub berri fiidnimo ayaa gurigeeda Amedspor kula kulmi doona. Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun, taageerayaasheeda kahor ciyaartii adag ayaa ku dhawaaqday in taraamyadu xor yihiin. Samsunspor, 2. league [More ...]
Hadafka Guud ee Magaalada Ankara 500 Km Road, 3 Million Tons Asfalt
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara, ayaa dhanka kale inta ay fulineyso mashruucyo gaadiid oo cusub dhammaan dhinacyada caasimadda, dhinaca kale waxay sii wadaa inay ka shaqeyso dhismaha iyo furitaanka wadooyin cusub. Macnaha guud, tuujinta asphalt [More ...]
Maanta taariikhda: 2 September 2010 Darussafaka station